Nyochaghachi Ụtụ Isi site na Canada Revenue Agency
Ihe mere CRA ji atụ ụtụ isi na mgbe ị nwere ike ịtụ anya otu
Ebe ọ bụ na ụtụ isi ndị Canada na-adabere na nyocha onwe onye, ​​kwa afọ, Canada Revenue Agency (CRA) na- eduzi usoro nyocha nke ụtụ isi ntinye iji hụ mmehie ndị a na-eme ma hụ na anyị na-akwado iwu ụtụ isi nke Canada. Nyocha ahụ na-enyere CRA aka ịhazigharị ebe nghọtahie na imezi nduzi na ozi ha nyere ndị Canada.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ụtụ isi ụtụ gị maka nyochaa, ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka ụtụ isi ego.
Olee otú nkwụghachi ụtụ si bụrụ nhọrọ maka nyochaa
Ụzọ anọ bụ isi a ga-esi nweta nlele ụtụ maka nyochaa bụ:
atụle nlele ụtụ isi site na isi ihe ọmụma, dị ka akwụkwọ akụkọ ego
ụdị ụtụ isi ma ọ̄ bụ ụtụ a na-ekwu
akụkọ nlele akụkọ banyere onye, ​​dịka ọmụmaatụ, ịlele iji hụ na e mere mgbanwe na nzaghachi a nyochaa.
O nweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na- edeghachi akwụkwọ ntanetị ma ọ bụ site na mail. Usoro nyochaa nhọrọ bụ otu.
Mgbe Echere Ụtụ Isi
A na-ebu ụzọ nyochaa ụtụ isi nchịkwa nke Canada na-enweghị nyocha akwụkwọ ntuziaka na a ga-ezipụ ọkwa nyocha na ụtụ isi (ma ọ bụrụ na ọkwesịrị) ozugbo o kwere omume. A na-emekarị ihe dịka izu abụọ na isii ka CRA nataghachiri. Ntụle kọmputa nke CRA na-ekpuchi nkwụghachi ego ọ bụla, ma, a pụrụ ịhọrọ nlele ụtụ maka nyochaa mgbe e mesịrị. Dika CRA kwuru na General Income Tax and Benefit Guide , ndị iwu kwụrụ ụgwọ na-achọ iwu ka ha debe akwụkwọ na akwụkwọ maka ọkara ma ọ dịkarịa ala afọ isii na nyocha.
Ụdị Ụtụ Isi
Ụdị reviews ndị a na-enye echiche nke mgbe ị nwere ike ịtụ anya nyochaa ụtụ isi.
Nyocha a na-atụle nyocha - A na -eme nnyocha ndị a na ụtụ isi tupu a nyefee ọkwa nke Nyocha. Oge kachasị elu bụ February na July.
Nhazi nyocha (PR) - A na-eme atụmatụ ndị a mgbe a na-ezipụ Ntụle Ntụle.
Oge kachasị elu bụ August ruo December.
Mmemme na - ejikọta - Usoro a na - ewere ọnọdụ mgbe e zigara ọkwa nyocha. A na-eji ozi gbasara ụtụ isi tụnyere ozi site na isi mmalite ndị ọzọ, dịka T4 na ihe ndị ọzọ gbasara ụtụ isi. Oge kachasị elu bụ October ruo March.
Usoro mmemme ahụ na-edozi ego nchịkọta nke ndị mmadụ na-akọ ma dezie njehie na njedebe RRSP nke onye ụtụ isi na ọnụahịa ndị metụtara ya na nkwonkwo dịka ego nlekọta ụmụaka na ụtụ isi na mpaghara na ụtụ isi na mpaghara.
Mmemme Mgbakwunye ahụ na-ekpuchikwa Mmasị Mmezi Nhọrọ Ndị Bara Uru bụ nke na-achọpụta ụgwọ akwụ ụgwọ a na-akwụ n'okpuru ebe a gbasara ụtụ isi a tụpụtara na isi ego ma ọ bụ onyinye Canada. A na-agbanwe nkwụghachi ụtụ na ọkwa nke nchịkwaghachi.
Achọpụta Pụrụ Iche - A na-eme nyocha ndị a na-atụ ụtụ isi tupu ha abanye na mgbe a ga-enye ọkwa Ọhụụ nke Reassessment. Ha na-amata ma ọ bụ ọnọdụ na ọnọdụ onye ọ bụla nke na-ekweghị na ya. A na-ezitere ndị na-akwụ ụtụ ego arịrịọ maka ozi.
Otu esi eme ka nyochaa ugo nke CRA
Na nyochaa ụtụ isi, CRA na-ebu ụzọ nwaa ịnweta nkwupụta onye ụtụ isi site na iji ozi ha nwere site na isi mmalite ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ chọrọ ozi ndị ọzọ, onye nnọchiteanya CRA ga-akpọtụrụ onye na-atụ ụtụ isi site na ekwentị ma ọ bụ ederede.
Mgbe ị nabatara arịrịọ CRA, jide n'aka na ị gụnyere nọmba ọnụ ọgụgụ dị na aka nri nke akwụkwọ ozi ahụ. Zaa n'ime oge etiti. Jide n'aka inye akwukwo niile na / ma obu akwukwo ndi a choro. Ọ bụrụ na ịnwetaghị ederede ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla, gụnye nkọwa ederede ma ọ bụ kpọọ nọmba na ala nke akwụkwọ ozi ahụ na nkọwa.
Ọ bụrụ na a na-enyocha nlegha ụtụ isi gị n'okpuru usoro nyocha nke nhazi (PR), ịnwere ike iziga akwụkwọ ederede na ntanetị site na iji ntụziaka CRA maka ịnye akwụkwọ na kọmputa.
Ajụjụ ma ọ bụ Njehie?
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ maọbụ kwenyeghị na ozi natara site na usoro nlekọta ụtụ isi nke CRA, buru ụzọ kpọọ nọmba ekwentị na akwụkwọ ozi ị nwetara.
Ọ bụrụ na ị ka ekwenyeghi mgbe gị na CRA na-ekwurịta okwu, mgbe ahụ ị nwere ikike iji nyocha nyocha.
Lee mmegide na esemokwu maka ozi ndị ọzọ.
Ebumnuche ndị dị na Canada
Ebee ka enweta nchịkọta ego nchịkwa Canada
Prime Minista Stephen Harper
Na-ekwu ego maka omenala na mpaghara Canada
Iwu maka ndị Canada na-eweta mmanya na-aba n'anya Canada
Ụlọ ọrụ dị iche iche nke Ụlọikpe na Gọọmentị Canada
Tommy Douglas, Nna Canada nke Nna-ahụ Maka Ahụ Ike
Akụkọ banyere ntaramahụhụ obodo na Canada
Ọrụ nke Prime Minister nke Canada
Hypotaxis n'asụsụ Bekee
Na-agba Mgbochi n'oge Ọsọ? Were Mkpụrụ Mkpụrụ
Eziokwu Eziokwu mbụ
A na-akpụ akpụ nke 3 y 10 años por estar ilegal na USA
Na Nazis na Ala Ugwu
French Verbs kachasị elu
Ihe 10 Ezigbo Anụmanụ Anụ
Top Bryan Adams Songs nke '80s
Nyocha nke Ed Tech na Kindergarten
Mahadum Louisiana University Admissions
'Zuru Briski nke a mụrụ n'ime Brothels' laghachiri ya Ịhụnanya mbụ: Foto
Mwakpo nke French - Na - abụghị isi
Akụkọ banyere Ọcha Ọcha
Kentucky State Nnụnụ
Massachusetts College of Pharmacy and Health (MCPHS) Admissions
Ndi Fetus nwere ikike?
Mmiri na-agba ọsọ na ihe ntanetị nke Eze
Ihe ndi ozo di iche iche nke oma
Nchịkọta iri kacha mma na pịkụl na akụkọ ihe mere eme
Cactus na-eme njem
A List nke Causal Essay Isiokwu ka Dee
Nkọwa nke Akụrụ Maara na Ndepụta
The World Symphony Orchestras 20 kachasị mma n'ụwa
Dipole Definition na Ihe Nlereanya
Ịga Ụlọ Akwụkwọ Kwa Ụbọchị!